Aiza no ahitanay fiarovana rehefa afaka roapolo taona aorian'ny 11 septambra? Mampientanentana!
Home » Lahatsoratra farany farany » WTN » Aiza no ahitanay fiarovana rehefa afaka roapolo taona aorian'ny 11 septambra? Mampientanentana!
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Zon'olombelona • Vaovao • People • fanorenana • Safety • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany • WTN
Ny fitsangatsanganana anio dia sarotra lavitra noho ny tamin'ny roapolo taona lasa izay. Raha ny marina dia niova be ny indostrian'ny fizahan-tany ary haingana dia haingana fa saika ny zavatra rehetra nilaza momba izany dia lasa saika lany andro avy hatrany. Roapolo taona lasa izay, vitsy no afaka nieritreritra ny fijaliana ara-toekarena sy ny fahafatesan'ny COVID-19, na ny fifehezana ara-tsosialy nateraky ny areti-mandringana. Mba hametrahana ny fomba fijery, tamin'ny 11 septambra 2001, olona maherin'ny 3,000 no maty tao anatin'ny iray andro. Amin'izao taona COVID-19 izao dia namono olona mihoatra ny 4 tapitrisa ny areti-mandringana.
The Networ momba ny fizahantany manerantanyk Filoha, Dr. Peter Tarlow, dia namoaka tatitra mahonon-tena hita taratra tamin'ny 20 taona lasa hatramin'ny 11 septambra 2001, sy ny fomba niova ny tontolon'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Na dia mbola mahatadidy aza ny ankamaroan'ny olona tamin'ireny andro nampalahelo ireny dia misy taranaka iray manontolo teraka taorian'ny 11 septambra 2001. Ho azy ireo ny 9/11 dia hetsika ara-tantara niseho taloha ela be.
Ny areti-mifindra COVID-2020 21-19 dia namorona fanamby vaovao ho an'ny fizahan-tany. Ho an'ny tanora maro dia tsy azony an-tsaina ny tontolon'ny fitsangatsanganana tsy misy ferana ary be loatra ny tsy mahatsapa fa ny fototry ny ankamaroan'ny fameperana ataontsika dia nipoitra tamin'ny zava-nitranga tamin'ny 11 septambra 2001.
Nandritra izay roapolo taona lasa izay, ireo matihanina momba ny fizahantany sy ny dia dia nahatsapa fa ilay fiheverana taloha hoe "ny filaminana tsy manampy na inona na inona ho amin'ny farany ambany" dia tsy manan-kery intsony ireo tompon'andraikitra fizahan-tany ankehitriny mahita ny filaminana ho ampahany lehibe amin'ny ezak'izy ireo amin'ny marketing. Ny fiarovana ny fizahantany sy ny polisy, zanaky ny zanaky ny tontolon'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia ampahany lehibe amin'ny indostria ankehitriny.
Tsy matahotra filaminana intsony ny mpanjifa fizahan-tany sy fizahan-tany; mandray ny lafiny rehetra amin'izany izy ireo, manomboka amin'ny fepetra fanoherana ny fampihorohoroana ka hatramin'ny resaka fahasalamam-bahoaka. Manontany ny mpivarotra momba izany ny mpitsangatsangana, mianatra momba azy io, ary mampiasa ny fepetra fiarovana ho singa lehibe amin'ny fanapahan-kevitra momba ny dia. Ankoatr'izay, ao amin'ny COVID-19, ny vahoaka izao dia mihevitra ny fepetra ara-pahasalamana ho toy ny ampahany amin'ny fiarovana ny fizahan-tany.
Iray amin'ireo fomba ahatongavan'ity vanim-potoana fandriam-pahalemana vaovao ity ny fitomboan'ny mpitandro ny filaminana tsy miankina (fantatra ihany koa amin'ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao ho mpitandro ny filaminana tsy miankina).
Ny fiarovana manokana, miaraka amin'ireo tobin'ny TOPP (sampan-draharaha miaro ny fizahan-tany sy ny fiarovana ny fizahantany) dia nanjary fitaovana ilaina amin'ny indostrian'ny fizahantany mahomby. Marina indrindra io zava-misy io any amin'ny firenena, toa an'i Etazonia sy ny faritra sasany any Amerika Latina, izay misy ny fihetseham-po manohitra ny polisy miaraka amin'ny onjan'ny asan-jiolahy sy any amin'ireo toerana izay mirona amin'ny fiarovana bebe kokoa.
Na dia tsy manan-jo hisambotra foana aza ireo hery fiarovana tsy miankina ireo dia manome fotoana fohy sy fotoana famaliana haingana izy ireo.
Araka izany, amin'ny vanim-potoana mihombo ny fisalasalana ara-politika sy ara-toekarena, ny filaminana manokana ho an'ny faritra fizahan-tany sasany dia nisafidy.
Nanjary safidy iray ihany koa izy io hijerena ireo governemantan'ny tanàn-dehibe miatrika ny hetahetan'ny besinimaro fiarovana sy fanalefahana ny vesatry ny hetra mavesatra. Tao anatin'izay roapolo taona lasa izay, ny besinimaro dia nanantena karazana filaminana tsy amin'ny seranam-piaramanidina ihany fa amin'ny toerana toy ny foibe fiantsenana, faritra fialamboly / zaridaina, tobim-pitaterana, hotely, foiben-toeran'ny fivoriambe, sambo fitsangantsanganana ary hetsika ara-panatanjahantena.
Na eo aza ny fanatsarana maro eo amin'ny tontolon'ny fiarovana ny fizahantany sy ny TOPPs, mbola betsaka ny zavatra tokony hatao.
Ny nataontsika teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany nandritra ny folo taona lasa
Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina
Angamba tsy misy ampahany amin'ny fizahan-tany nahazo fiheverana betsaka manerantany toy ny orinasam-pitaterana an'habakabaka. Ny roa-polo taona lasa dia nisy ny fisondrotany ho an'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina, ka ny 2020 no ambany indrindra amin'ny indostria. Tsy misy isalasalana fa ny seranam-piaramanidina dia ampahany lehibe amin'ny fizahan-tany: raha tsy misy fitaterana an'habakabaka dia maty tampoka ny toerana maro, ary ny fifamoivoizana an-habakabaka dia ampahany lehibe amin'ny asa fizahan-tany fialantsasatra ary koa amin'ny varotra, dia lavitra, ary fandefasana entana.
Ny fitsangatsanganana an-habakabaka ankehitriny dia tsy mahafinaritra kokoa noho ny tamin'ny roa ambin'ny roapolo taona lasa izay na roa taona lasa aza. Mpandeha maro no manontany tena raha ilaina daholo ireo fepetra ireo na manontany tena raha toa tsy tsy mahay mandanjalanja, mandany ary tsy misy dikany izy ireo. Ny hafa kosa manana fomba fijery mifanohitra. Amin'ny vanim-potoanan'ny areti-mifindra, ny fiarovana ny fitsangantsanganana an-habakabaka dia tsy ny fiarovana ny fiaramanidina fotsiny fa koa ny hahazoana antoka fa madio ny fantsona ary tsy mampiely aretina ny fitaterana entana.
Tsy ny lalàna mifehy ny fiarovana vaovao fotsiny no nanasarotra ny fiainana ny mpandeha, fa koa ny endrika isan-karazany amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Manomboka amin'ny sakafo ka hatrany amin'ny tsiky dia tsy dia manome firy ireo zotram-pitaterana an'habakabaka ary matetika dia toa manimba ny fomba itondrany ny besinimaro. Mampamoy fo, noho izany, fa kely dia kely ny zava-bita amin'ny fiarovana ny fitaterana an'habakabaka. Betsaka ny mpanjifa manontany tena raha mihetsika ny fiarovana ny seranam-piaramanidina noho ny mavitrika.